MotioCAP - Cognos Ukufakazela ubuqiniso
Okwe-IBM Cognos Analytics
Uhlobo Lokulawulwa Nokuthunyelwa
Ibhulogi le-BI ne-Analytics
Ukuhlinzeka Ithimba Lakho Ngenzuzo Yezibalo Eziqhubekayo
Motio yenza imisebenzi eyisicefe yokuphatha i-BI futhi ihlehlise izinqubo ezinzima zokuthuthuka kwe-BI ukuvumela Ochwepheshe bakho be-Analytic bagxile kulokho abakwaziyo: ukuletha ukuhlakanipha okusebenzayo kubaphathi bebhizinisi ukubanikeza isithombe esigcwele sebhizinisi labo.
QAPHELA MOTIOCI Amakhasimende
Ukukhishwa okusha kwe MotioCI (inguqulo 3.2.10 FL9) iyatholakala ukuze ilandwe.
Ukulungiswa Kwesiphazamisi Okubalulekile:
Amakheli okuba sengozini kwe-Log4j2 okubalulekile CVE-2021-45105 ngokubuyekezela ku-Log4j2 v2.17.
Lokhu ukulungisa futhi akukho ukunciphisa okudingekayo uma amakhasimende esethuthukele kule nguqulo esanda kukhishwa MotioCI. Uma amakhasimende esevele alandele izinyathelo ngokwethu Isihloko se-KB lapha, akudingeki ukuthi bathuthuke ukuze banciphise izinkinga. Uma izidingo zokuphepha ngaphakathi kwenhlangano yakho zidinga ukuthuthukela ku-v.2.17 lapho-ke ukuthuthukiswa kuzodingeka kwenziwe.
Thwebula MotioCI 3.2.10 FL9 (Motio i-akhawunti yewebhusayithi iyadingeka).
QAPHELA: Lokhu akuthinti noma iyiphi enye Motio isoftware - MotioPI, MotioCAP, PersonaIQ, Reportcard or Soterre
Motio ukwesekwa kulapha ukuze kukusize ngaphandle kwezindleko ngokuthuthukela kwakho ku-3.2.10 FL9 Contact Motio Amaprosesa asekelwe.
Imicimbi kanye nama-Webinars
Ubuwazi Ukusekela Okuphambili Kwe-Gitoqlok Kumahhala?
Uma usuvele usebenzisa i-Gitoqlok, i-plugin yamahhala ye-Qlik Sense ehumusha izinto ezibonakalayo kanye nemibhalo elayisha idatha ngqo esipheqululini sakho, qiniseka ukuthi ubhalisela ukwesekwa okuyiprimiyamu! Kumahhala ngokuphelele!
Ukuvala Igebe Ukuze Uthole Isipiliyoni Se-Qlik Sense Esingenamthungo
Ufuna ukugeleza komsebenzi okungenazihibe nge-Qlik Sense. Ufika kanjani lapho?
Ulungele ukufunda ukwenza okuhlangenwe nakho kwakho kwe-Qlik Sense kusebenze kahle ngokuzenzakalelayo kuyilapho ugcina ukuthobelana nezindinganiso zenhlangano? Ochwepheshe bethu bazochaza indlela yokwenza i-Qlik ngokuzethemba ngaphandle kwemithwalo yokuphatha noma ngaphezulu.
Sifuna ukukusiza ukuxazulula izingqinamba zakho ze-BI! Ake sixhume kwenye yale micimbi ezayo nama-webinars.
Buka Yonke Imicimbi nama-Webinars
Izixazululo zethu zesoftware zikusiza ukuthi ufeze impumelelo ye-BI kuCognos Analytics, Qlik, naku-Planning Analytics Inikwe amandla yi-TM1.
With MotioIsoftware engohlangothini lwakho, uzothola ukusebenza kahle emsebenzini wakho, uthuthukise ikhwalithi nokunemba kwempahla yolwazi, wandise ukusebenza kwepulatifomu, uzuze isikhathi esisheshayo sokumaketha, futhi ulawule ukuphatha izinqubo.
Izibalo ze-IBM Cognos
Izixazululo zokwehlisa ukukhushulwa kwe-Cognos, ukuthunyelwa, ukulawulwa kwenguqulo nokuguqulwa kokuphathwa, ukwenza imisebenzi yokuhlola neyokuphatha, ukwenza ngcono ukusebenza, ukunika amandla i-CAP & SAML, kanye nokufuduka / indawo yokubeka indawo yegama lesikhala.
Izixazululo zokulawulwa kwenguqulo nokuguqulwa kolawulo kuQlik nokwenza ngcono ukusebenza kahle kokuthunyelwa.
Izibalo Zokuhlela ze-IBM
Izixazululo zokulawulwa kwenguqulo nokuphathwa koshintsho ku-Cognos TM1 ne-Planning Analytics, yenza lula inqubo yokuthunyelwa, ukwenza ngcono imisebenzi yokuphatha nokuphatha izinguquko zokuphepha.
Izindaba Zempumelelo Zamakhasimende
Musa nje ukuthatha izwi lethu ngakho. Funda ngamakhasimende ethu nokuthi kanjani Motio ibasizile bathuthukisa izinkundla zabo zezibalo futhi bonga isikhathi nemali ebalulekile.
Ngabe Uyayazi Imikhuba Engcono Yokuthuthukisa ye-Cognos?
Phakathi neminyaka Motio, Inc. ithuthukise "Imikhuba Engcono Kakhulu" ezungeze ukuthuthukiswa kwe-Cognos. Lokhu sikudale ngokwenza okungaphezulu kuka-500 nokulalela ukuthi amakhasimende ethu athini. Uma ungomunye wabantu abangaphezu kuka-600 abebehambele omunye wethu...
Motio, Inc. Ithola i-Gitoqlok
Motio, Inc. Ithola i-Gitoqlok ehlanganisa ukulawulwa okuqinile kwe-Version Ngaphandle Kwezobuchwephetsha I-PLANO, eTexas - 13 Okthoba 2021 - Motio, Inc., inkampani yesoftware ekusiza ukuthi ugcine inzuzo yakho yezibalo ngokwenza ubuhlakani bebhizinisi lakho ne-analytics ...
Ngakho-ke Uthathe Isinqumo Sokuthuthukisa Ama-Cognos… Manje Yini?
Uma unesikhathi eside Motio mlandeli, uzokwazi ukuthi asibona abantu esingabazi ekuthuthukisweni kwamaCognos. (Uma umusha ku- Motio, wamukelekile! Siyajabula ukuba nawe) Sibizwe nge- “Chip & Joanna Gains” yeCognos Upgrades. Kulungile lowo musho wokugcina uyihaba, ...
Ungesabi, Ukuthuthuka okulula kweCognos Kulapha
Ithimba lakwaCoBank lithembele kuCognos ngokubika kwayo kokusebenza kanye nohlelo oluyinhloko lokubika kwezezimali. Ukugcina ama-Cognos athuthukisiwe akuvumela ukuthi kugcinwe ukuhlanganiswa namanye amathuluzi nezinhlelo ze-BI. Ithimba liqukethe abasebenzisi bebhizinisi abangama-600 abanedlanzana elithuthukisa imibiko yabo esikhaleni "Sokuqukethwe Kwami".
I-Virtual Cognos User Group - eNyakatho Texas
Uma uzwa igama elithi, “Texas” yini efika engqondweni yakho? Mhlawumbe izigqoko ezingamalitha ayishumi, amabhuzu e-cowboy, i-barbeque, i-Cognos optimization performance! Kulungile, mhlawumbe ithuluzi lakho le-BI olithandayo alikho phezulu kwengqondo, kepha kufanele kube njalo! Ngokokuqala ngqa, Motio ibamba iNyakatho ebonakalayo ...
Buka Zonke Izifundo Eziyizibonelo
Funda Motio umkhiqizo “kanjani-to's,” i-BI imikhuba emihle nezindlela zemboni, nokuningi.
BlogIzibalo zeCognosThuthukisa IfektriUkuthuthukiswaUkuthuthukisa ama-Cognos
BlogUmlando we Motio Motio I-QlikSoterre
Motio, Inc. Ithola i-Gitoqlok ehlanganisa ukulawulwa okuqinile kwe-Version Ngaphandle Kwezobuchwephetsha I-PLANO, eTexas - 13 Okthoba 2021 - Motio, Inc., inkampani yesoftware ekusiza ukuthi ugcine inzuzo yakho yezibalo ngokwenza ubuhlakani bebhizinisi lakho futhi ...
Usukulungele ukwenza lula futhi usebenze ama-platforms akho we-BI nama-analytics?
Thwebula MotioI-PI Freeware. Noma cela MotioPI noma MotioCI ukusetshenziswa kwamahhala ngokuthuthukisa kwakho kweCognos Analytics.
IPlano, TX 75024
Ucingo: 1 (972) 447-9595
Inombolo yamahhala: 1 (877) 362-8708
© 2021 Motio. Wonke Amalungelo Agodliwe ● Imibandela ● Inqubomgomo yobumfihlo